Iibhatyi zesikhenkcezisi → Izambatho zamagumbi abandayo
Iibhatyi eziqinisekisiweyo zefriji
Izixhobo zabasebenzi kwi iibhatyi zesikhenkcezisi umgangatho ophezulu, okhuselekileyo, ozinikele ekusebenzeni kumaqondo obushushu asezantsi yinto ebaluleke kakhulu kubaqeshi. Ukukhetha imodeli elungileyo Umceli mngeni omkhulungakumbi ukuba ezo mveliso azi-odolwa rhoqo.
Kwivenkile yethu, sinikezela ngeemodeli ezisemgangathweni ezisemgangathweni ezivela kubavelisi abathembekileyo ababandakanyeka kwimveliso yeempahla ezizodwa.
I-Hi-Glo 25 Coldstore ibhatyi, ukhuseleko ukuya kuthi ga kwi -64,2 ° C
Iijekethi isikhenkcezisi ziimodeli ezikhoyo ngeendlela ezahlukeneyo, ezahlulahlula kuyilo, ixabiso kunye nenjongo. Ngenxa yenjongo ethile yokuthunga, kusetyenziswa izinto ezisemgangathweni ophezulu kakhulu kwaye kwasetyenziswa ogqityiweyo ochanekileyo.
Konke oku ukukhusela ngokuqinileyo umqeshwa kwaye akhonze iminyaka emininzi. Enye yeemodeli ezaziwa kakhulu yiHi-Glo 25 Coldstore jacket ebonelela ngokhuseleko ukuya -64,2 ° C (ifoto), exhotyiswe ngenkqubo yala maxesha, ye-5-layer, eyilelwe ukubambisa uninzi lomaleko womoya.
Ibhatyi ekhankanyiweyo ihlangabezana nomgangatho we-EN342, owenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa kwizitora ezinobushushu ukuya kuthi ga kwi -64,2 ° C. Nangona kunjalo, imodeli yebhatyi esiyinikezelayo, ekhusela kakhulu, ikhusela kwiimeko zokusebenza ukuya kuthi ga kwi -83,3 ° C ngeyure e-1 ngomsebenzi ophakathi, ukuya ezantsi ukuya -44,01 ° C iiyure eziyi-8 ngomsebenzi ophakathi.
La maxabiso ayasebenza ukuba ibhatyi nebhulukhwe Hi-Glo 40 dungarees zinxitywe kunye.
Ibhatyi yefriji yeColdstore CS-10, ukhuseleko ukuya kuthi ga kwi -25 degrees C.
Abavelisi bethu bagxile kumgangatho ogqwesileyo kunye nokugqitywa ngokuchanekileyo. Impahla ehambelana nomgangatho we-EN 342 ibonelela ngokhuseleko olugqwesileyo kumaqondo obushushu asezantsi kakhulu. Ukusebenza kwindawo ebandayo kubonakaliswa bubushushu obulinganayo okanye obungaphantsi kwe - 5 ℃. Kubalulekile ukuba ungavumeli iimpahla ukuba zimanzi - ukufuma okanye isikhukula kunokuba nesiphumo esibi.
Iibhatyi zesikhenkcezisi ezifumanekayo ngobukhulu obahlukeneyo zithetha ukuba unokufumana ngokulula iimpahla ezikulungele ngokugqibeleleyo. Ukuthengwa kwempahla eqinileyo kutyalo-mali olunenzuzo. Ukulandela iingcebiso zomenzi, iya kusebenza iminyaka emininzi, eqinisekiswa ngabanini beenkampani ezinkulu kunye nabasebenzisi ngokwabo.
Ibhatyi yefriji yeAllegroIsikrozisi se-allegro kutrkakurtkaIjacket yaseColdstoreibhatyi kubushushu obuphantsiIjacket ye-Hi-Glo - iidigri ezingama-40ibhatyi yokukhuselaIbhatyi ebonakalisa amagumbi abandayoibhatyi yokugquma thermalibhatyi eqinisekisiweyoiibhatyi zesikhenkcezisiiibhatyi zesikhenkcezisi